Tirada Dhimashada Qaraxii Muqdisho Oo La Shaaciyey » Axadle Wararka Maanta
Tirada dhimashada qaraxii Muqdisho oo la shaaciyey
Muqdisho (Axadle) – Faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax is-miidaamin ah oo galabta ka dhacay Bar Control oo ciidamo ka tirsan militeriga Soomaaliya ay ku leeyihiin afaafka hore ee xerada Jeneraal Gordon ee Muqdisho, taas oo ku taalla meel u dhaw xarunta Xalane.
Ilo dhanka ammaanka ah ayaa Axadle u xaqiijiyey in 11-qof ay ku geeriyoodeen qaraxaas, kuwaas oo u badan askar militeriga ka tirsaneyd, halka dhaawacyo badana ay jiraan, in kastoo hey’adaha ammaanka ee doladda Soomaaliya aysan weli khasaaraha ka soo saarin faahfaahin rasmi ah.
Qaraxa ayaa imanaya toddobaad kadib markii Axadle ay shaacisay xog ku saabsan digniin kasoo baxday xafiisyada amni ee ay hay’adaha ajnabiga ah ku leeyihiin Muqdisho, gaar ahaan xarunta Xalane iyo sirdoonka Soomaaliya, oo ku saabsaneyd inay Muqdisho ka dhici kaaraan weeraro culus.
Xogta ay bixiyeen khubarada amniga, oo ay heshay Axadle, ayaa sheegeysay in weerarada qaraxyada ah ee laga cabsi qabo ee ka koobnaan; kara rag soo xirtay jaakadaha qarxa, gaadiid qaraxyo ah iyo qaraxyada gaadiidka lagu xiro ee badanaa lagu dilo wadaha gaariga.